Yakaverengwa Rudo, Bhokisi reAlbum uye nezvimwe, zvemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Yakaverengwa Rudo, Bhokisi reAlbum uye nezvimwe, zvemahara kwenguva pfupi
Chishanu chakazosvika saka hatisi kuzopotsa mukana wekupedza svondo rino rekushanda nesimba nekukupa mamwe mafomu nemitambo inowanzo bhadharwa asi izvo, ikozvino, kana uchimhanyisa, unogona kusununguka zvachose.
Izvo hazvitauri kutaura kuti izvi zvinopihwa ndezvenguva yakatemwa, nekudaro, kana iwe uchida kutora mukana wekudzikisira, zvakanakisa kumisa nyaya uye kurodha pasi nekukasika kune yako iPhone kana iPad. Ivo vakasununguka saka kana iwe usingavade, wobva wadzima gare gare uye ndizvozvo.
1 Yakaverengerwa Rudo - Iyo Yerudo Counter
3 Sago Mini Zvikara
Yakaverengerwa Rudo - Iyo Yerudo Counter
Ini ndaifunga kuti ndanga ndazviona zvese mumapora anotapira paApp Store, asi ndanga ndisina chokwadi. With Kuverengerwa rudo unogona chengetedza makore mangani, mwedzi, masvondo, mazuva, maminetsi nemasekondi zvawave nemumwe wako. Uye chii chiri kushandiswa kweizvi? Iwe unobvunza. Nyore! Paunocheka, iwe unogona kumupa mhosva yenguva yese yaakarasa iwe, asi chenjera! Nekuti pamwe mumwe wako ndiye anochengeta mamaki uye iwe unorasikirwa. Ah! Uye nenzira, hauzombokanganwa zuva rako rekuyeuka zvakare.
Kuverengerwa rudo Iine mutengo wenguva dzose we € 1,09 iyo yatove € 1,09 pamusoro peicho chero munhu anofanira kunge achida kubhadhara asi izvozvi mahara, uye icho chimwewo chinhu.
Kuda Counter - Verenga Rudo Rwakovakasununguka
Ngatiisei zvinyararire padivi kuti titaure nezvazvo AlbumBox, chishandiso chinonyanya kubatsira kupfuura yapfuura nekuti chinokutendera ramba wakaviga iwo mafoto uye mavhidhiyo aunoda mukati mekushandisapamwe nekutora mapikicha uchishandisa yaisanganisira "yakavanzika kamera". Uye zvakare, iwe unogona kuwedzera danho rekuchengetedza rako rakavanzika mafoto uye mavhidhiyo nekugonesa yekuwana kodhi kana pateni.
Mamwe emabasa ayo akatanhamara uye maficha ndeaya:
Chengetedza kupinda kune iyo app nekodhi
Sarudza a yakatarwa kodhi kune faira chairo.
Basa "Code in disguise" saka hapana anogona kuona zvaunonyora.
Inoenderana ne akawanda mafomati emifananidzo: tiff, tif, jpg, jpeg, gif, png, bmp, bmpf, ico, cur, xbm.
Inoenderana ne mafomati akawanda evhidhiyo senge mov, mp4, rmvb, mkv, mpv, m4v, 3gp, flv, rm ...
Iwe unogona ronga mafaera ako pasi pematanho akasiyana senge saizi, zita, zuva kana mhando.
Iwe unogona zvakare gadzira maforodha uye maforodha.
Multiple faira kuchinjisa.
Kugoneka kwe share neemail.
Inosanganisira vhidhiyo inoridza saka haufanire kusiya iyo app.
Kuona mafaera mu gallery mode kana seye slideshow.
Kutumira faira kuburikidza neWiFi kana kuburikidza iTunes
AlbumBox Iine mutengo wenguva dzose we € 3,49 asi ikozvino unogona kuiwana mahara kwenguva pfupi.
Sago Mini Zvikara
Kana nhasi hatisi kuzokanganwa chidiki cheimba, varaidzo yavo uye kudzidza kwavo. Kune izvi isu tine Sago Mini Zvikara, UN mutambo unonakidza wekudzidzisa yakanyatsogadzirirwa vana vari pakati pemakore maviri kusvika mashanu ezera rinovatendera kuti vagadzire yavo monster ine mavara mazhinji uye zvishongedzo; Vachakwanisa kushandura nyanga, muromo, maziso, kugovana navo nevabereki vavo neshamwari uye nezvimwe zvakawanda.
Icho chiitiko icho inokurudzira kugona, chishuvo chekutsvaga, hunhu hwekuchengetedza uye kuchengetedza, pakati pezvidiki.
Sago Mini Zvikara Iine mutengo wenguva dzose we € 3,49 asi ikozvino unogona kuiwana mahara kwenguva pfupi.
Sago Mini Zvikara4,49 €
Uye isu tinopera nemumwe mutambo, ino nguva yevasiri vadiki zvakadaro. Consistency ari nhamba dambanemazwi izvo zvichaita kuti iwe ufunge zvakaoma. Iyo ine akawanda mazinga uye inowedzera kuwedzera kuomarara. Pese paunofambisa iyo inosarudza, iyo nhamba yaunosarudza inotevera inowedzera neumwe. Pamusoro pezvo, bhodhi rine mataira erima uye anopenya, imwe neimwe iine hunhu hwakasiyana: iwo erima anoderedza huwandu neumwe nepo iwo anopenya achiita zvakapesana.
Consistency Iine mutengo wenguva dzose we € 1,09 asi ikozvino unogona kuiwana mahara kwenguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » Yakaverengwa Rudo, Bhokisi reAlbum uye nezvimwe, zvemahara kwenguva pfupi
Sezviri pachena Album Vox ndeye mahara, kunze kwekunge paine kodhi yekuvhura iyo yakabhadharwa mabasa
Affinity Photo mugadziri wekutanga Affinity Dhizaini, chirongwa chevagadziri uye vatevedzeri